भीमदत्त नगरपालिकामा अस्पताल सञ्चालन तयारी - Everest Dainik - News from Nepal
कञ्चनपुरः कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का विरामी बढ्न थालेपछि महाकाली अस्पताल बाहिर उपचारका लागि तयारी सुरू गरिएको छ ।
अस्पतालमा सबै विरामीको उपचार गर्न नसकिने भएकाले अस्पताल बाहिर वैकल्पिक व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय र भीमदत्त नगरपालिकाले महाकाली अस्पतालको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रका अस्पतालमा कोरोना संक्रमित विरामीको उपचार गर्ने तयारी अघि बढेको छ । त्यसका लागि जिल्ला प्रशासन, भीमदत्त नगरपालिका र महाकाली अस्पताल सेफर हस्पिटललाई कोरोना अस्पताल बनाउन सहमति गरेका छन् ।
भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टको अध्यक्षतामा आइतबार नगरपालिकामा बसेको बैठकले सेफर अस्पतालको भौतिक र जनशक्ति व्यवस्थापन अध्ययनका लागि तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा महाकाली अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. हरि कुमार श्रेष्ठ, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख शिवराज सुनार र भीमदत्त नगरपालिका आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाई उप शाखा प्रमुख नरेन्द्रराज जोशी छन् ।
बैठकमा नगर प्रमुख विष्ट सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी नूरहरि प्रसाद खतिवडा महाकाली अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्णदत्त जोशी बोक्सर, अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. हरि कुमार श्रेष्ठ र सेफर अस्पतालका सञ्चालक सहभागी भएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस कोरोनाविरुद्ध सबै संयन्त्र प्रयोग गर्ने भीमदत्त नगर कार्यपालिकाको निर्णय
कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक बढ्न थालेपछि अस्पतालमा सबै विरामीको उपचार गर्न नसकिने भएकाले विकल्पका रुपमा सेफर अस्पताललाई कोरोना अस्पतालका रुपमा सञ्चालन गर्न लागिएको नगर प्रमुख विष्टले बताए ।
‘अहिले दैनिक रुपमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ, भोलि विरामीले अस्पताल भरिन सक्छ, त्यो बेला अस्पतालको स्रोत साधन, जनशक्तिले सबै विरामीको उपचार गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन’ उनले भने, ‘त्यस कारण अस्पताल बाहिर पनि उपचारका लागि तयारी गरिएको छ, त्यसमा नगरपालिका सक्दो सहयोग गर्न तयार छ ।’
महाकाली अस्पतालमा कोरोना विरामीको उपचारका लागि १० शैय्याको आइसोलेसन कक्ष बनाइएको छ । आइसोलेसनका सबै शैय्यामा विरामी भर्ना गरिएका छन् ।
नगर प्रमुख विष्टले कञ्चनपुर जिल्ला र भारतबाट घर फर्किने जिल्ला बाहिरका विरामीलाई समेत मध्यनजर गरी कोरोना अस्पताल सञ्चालनको तयारी सुरू गरिएको बताए ।
याे पनि पढ्नुस भीमदत्तमा ड्रोनबाटै लकडाउनको निगरानी
भीमदत्त नगरपालिका सिएमए अनमी तालिम केन्द्र (आइसिएच) लाई कोरोना विरामीको उपचारका लागि आइसोलेसन बनाउने तयारी गरिएको छ । यस अघि नगरपालिकाले आइसिएचमा एक सय बेडको क्वारेन्टान बनाइएको थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी खतिवडाले कोरोना संक्रमित विरामीको उपचारका लागि योजना सहित सेफर हस्पिटललाई कोरोना अस्पतालका रुपमा सञ्चालन गरिने बताए । ‘भोलि विरामीको चाप बढेपछि के गर्ने, बाहिर लैजाने बाध्यता भयो भने के गर्ने, त्यसका लागि अहिलेदेखि नै तयारी थाल्न आवश्यक छ’ उनले भने,‘योजना सहित अस्पतालको नेतृत्वमा सेफरलाई सञ्चालन गर्छौ ।’
कोरोना अस्पतालमा महाकाली अस्पतालको नेतृत्वमा अस्पताल सहित सेफर हस्पिटल, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र भीमदत्त नगरपालिकाका स्वास्थ्य जनशक्ति परिचालन गरिने भएको छ । त्यस बाहेक अपुग जनशक्ति स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाबाट ल्याउने छलफल गरिएको छ ।
शल्यक्रिया कक्ष, फार्मेसी कक्ष सहित अस्पताल ५५ शैय्या छन् । सेफर हस्पिटलका सञ्चालकले १५/२० शैय्या थप बढाउन सकिने बताए ।
याे पनि पढ्नुस भीमदत्त नगरपालिकामा आँखा शिविर, ५५२ जनाले लिए सेवा
महाकाली अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जोशीले नगरपालिकाले जनशक्ति सहित अन्य व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न पर्ने बताए ।
महाकाली अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. श्रेष्ठले सबै कोरोना विरामीको अस्पतालमा उपचार गर्न सकिने अवस्था नभएकाले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु पर्ने बताए । ‘संक्रमित बढेको नै छ, अस्पतालको क्षमताले धान्न सक्ने अवस्था नआउन सक्छ’ उनले भने,‘जनशक्ति व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालय यस अघि नै कोरोना विरामीको उपचारका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य कार्यालयलाई निर्देशन दिएको
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख सुनारले कोरोना विरामीको उपचारका लागि वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि तयारी अघि बढाउन स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट निर्देशन आएको बताए । ‘ठूलो संख्यामा विरामी आएपछि समस्या हुन्छ, त्यसका लागि अहिलेदेखि नै तयारी थाल्न आवश्यक छ’ उनले भने ।